Ngwọta na-Nyefee Ndi ana-akpo ka iOS 7
> Resource> Nyefee> Solutions nyefee Ndi ana-akpo ka iOS 7
Mgbe upgrading ka iOS 7 ma ọ bụ-enweta ihe iPhone 5s ma ọ bụ iPhone 5c na-agba ọsọ na iOS 7, i nwere ike iji nyefee kọntaktị site na kọmputa gị, email akaụntụ, ma ọ bụ ọbụna ochie Apple ngwaọrụ iOS 7 iPhone. O yiri ọ bụ ezigbo mfe ime nke a. Otú ọ dị, mgbe ị na-etinye aka gị na ya, ị nwere ike ọ gaghị inwe mgbagwoju anya. Ndị na-esonụ Aga m ẹkenam ụzọ nyefee kọntaktị zọpụta dị iche iche ebe ka iOS 7. Gụọ na iji mụtakwuo:
Part 1. mmekọrịta Ndi ana-akpo kwadoo na iCloud ka iOS 7
Part 2. Nyefee kọntaktsị na Email Accounts ka iOS 7
Part 3. Copy kọntaktsị na vCard faịlụ ka iOS 7
Part 4. Nyefee Ndi ana-akpo site na Old iOS na ngwaọrụ iOS 7
Part 5. Nyefee Ndi ana-akpo site na Android na ekwentị iOS 7
Ọ bụrụ na ị na-eji iCould nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị tupu upgrading ka iOS 7, mgbe ahụ, na-i nwere ike iji iCould ndabere ka weghachite kọntaktsị na ika-ọhụrụ iOS 7 onwem ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị ọhụrụ Apple ngwaọrụ iOS 7 onye ọrụ, echegbula! Ozugbo ị na-eme na nkwado ndabere na ndị ọzọ Apple ngwaọrụ, ebe a i nwere ike iji iCould ka mmekọrịta kọntaktị ọhụrụ gị iOS ngwaọrụ dị ka mma. Ọ bụ nnọọ mfe.
Mgbe mwube gị iOS ngwaọrụ, a window ga-gbapụta, àjà nhọrọ Weghachi si iCloud ndabere. Enweta ya na-eso kpaliri. A nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, kọntaktị ga-synced gị iOS 7.
IHE: Weghachi si iCould ndabere bụ nanị dị mgbe ị na-mwube a ọhụrụ iOS 7 ngwaọrụ ma ọ bụ mgbe ị na-resetting niile ntọala na ihe iOS 7 ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee kọntaktị site na akaụntụ email na-iOS 7, ị nwere ike ịdabere na iTunes, akaụntụ email onwe ya, ma ọ bụ a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, dị ka Wondershare TunesGo. iTunes-enye gị ohere nyefee kọntaktị site na email ahịa na iOS 7. Ma ụfọdụ akaụntụ email awade mmekọrịta nhọrọ nakwa. Ka ihe atụ, Gmail mmekọrịta-enyere ndị ọrụ izipu kọntaktị site na Gmail ka iOS 7 ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-eji oge na iTunes ma ọ bụ akaụntụ email, ị mkpa n'ezie Wondershare TunesGo. Ọ na-ahapụ gị detuo kọntaktị site email ahịa, dị ka Outlook na Windows Live Mail, wdg gị iOS ngwaọrụ. Ma ọ dị mkpa, ị nwekwara ike mbubata vCard faịlụ ka iOS 7 na Wondershare TunesGo.
Download free ikpe version nke Wondershare TunesGo!
Part 3. Copy kọntaktsị na vCard faịlụ site na kọmputa na-iOS 7
Ọ bụrụ na ị zọpụta kọntaktsị na a vCard na kọmputa gị, nyefee na kọntaktị gị iOS 7 ngwaọrụ, ị ga-agbalị iCloud na kọmputa gị (Mac nwere iCloud na System Mmasị. Windows ọrụ mkpa na iCloud maka Windows PC aka) ma ọ bụ a ọzọ ngwá ọrụ (Wondershare TunesGo) mbubata kọntaktị site na vCard faịlụ mbụ.
Ọ bụrụ na ị Switched a ọhụrụ iOS 7 ngwaọrụ na chọrọ nyefee kọntaktị site ochie iOS ngwaọrụ ọhụrụ otu, e nwere ọtụtụ ụzọ i nwere ike na-adabere:
Ndabere kọntaktị na iCloud na mmekọrịta ọhụrụ iOS 7 ngwaọrụ e mesịrị;
Ndabere kọntaktị na akaụntụ email na mgbe e mesịrị mmekọrịta ha ka ha na iOS 7 na ngwaọrụ ahụ;
Jiri Wondershare TunesGo idetuo kọntaktị na iOS 7 ngwaọrụ si ochie otu;
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ọhụrụ na iOS 7 ngwaọrụ na chọrọ iṅomi kọntaktị site na Android, biko gụọ otú nyefee kọntaktị site na Android ekwentị iPhone 5s ma ọ bụ iPhone 5c.